Gabayga TAN DA ee QORSHE inuu ku qaatay waqtigii TET isaga oo leh u gaar ah haraaga ah - The Holy Land of Vietnam Studies
Baarayaal badan oo ajnabi ah ayaa ku saabsan Daraasadaha Vietnamese si ku meelgaar ah u aamminsan tahay in "soo celinta asalka ah" ay tahay in loo qoondeeyo Tan Da [Tản Đà] - a Gabay iyo a newsman, cadaalad asal ah taariikhda casriga ah Suugaanta Vietnamese iyo Saxaafadda. Maxaa looga jeedaa “jiraye”? - haddii mid si sax ah ama khalad ah u fahmo ereyga - waxay kuxirantahay aqoonta qofka. Sanadkan Taag [Tết] waqti, waxaan fursad u leennahay inaan dib u soo celinno "jajabkii nolosha"Gabayadii gabayga iyo wariye-yaasha wakhtigaas xurmada leh ee ummaddeenna.
Taasi waxay ahayd Taag [Tết] waqtiga sanadka Giap Tuat [Giáp Tuất] (1934 - Sanadka Eeyaha) - Ku dhawaad ​​70 sano kahor - Waqtigaas, gabayaa Tan Da [Tản Đà] waxaa loo qorayay Dong Wajiga [Phông PhápWaqtiga (Faransiis Indochina) leh Diep Van Ky [Diệp Văn Kỳ] gudaha Saigon. Ka dib markii uu u soo gudbiyo qoraalkiisa qodobbada loogu talagalay Taag [Tết] arrin, Tan Da [Tản Đà] waxaa la siiyay bil dhan mushaharkiisa, laakiin si dhakhso leh ayuu u qaatay lacagtaas oo dhan. Marka goorta Taag [Tết] wuu soo dhowaaday, gabayaaga wax boqol ah kama hadhin, iyo maadaama uu weyn yahaysakhraan,, Wuxuu ku dhib badnaan lahaa khamri la’aan. Newsman Diep Van Ky [Diệp Văn Kỳ] wuu fahmay dhibta wada-shaqeeyaha, sidaa darteed wuxuu isaga siiyay “hadiyad dheeraad ah oo sanadka cusub” ah Xaragada 5.
Marka la eego Dan bao [Dân ibao] (Wargeyska dadka) - Wariyaha Bui The My [Bùi Thế Mỹ] ayaa daabacay arrimaha Xilliga Xilliga oo isku xiga: 3-1940-1941. Ka sokow iyaga, majaladaha Dang Ngoc Anh [Ngng Ngọc Anh] iyo Mai Van Ninh [Mai Văn Ninh] ayaa daabacay arrimaha 3 sanadihii isku xigxiga 1943-1944 iyo 1945.
Haddii "cod" hooseeya "la soo bandhigi lahaa wakhti qalalaase dhaqaale, markaa, goorma ayaa la soo gaadhay xilligii dagaalka, isla codadkan ayaa wali u adeegi jiray dadka badan maskaxdooda kacsan. Aan dib u aqrino maqaal lagu daabacay the Dien Tin [Điện Tín] gudaha 1945.
“… Dadka kaliya ee isku qariyey meel god hoostiisa ah ayaa ogaan karay sida dhulka uu u qoto dheer yahay; oo kaliya kuwa badda galay waxay ogaan karaan baaxadda badda. 6-dii sano ee la soo dhaafay, waddankeenu wuxuu la mid ahaa markab taagan badda, halka gudaha weli ay ku yaalliin god yar oo hoy ah.
Cillad darrada dadku waxay ka kooban tahay fekerka ah in dadka kale ay ka barako badan yihiin naftooda, halka dhab ahaantii, maalin kasta, ay helayaan duco aad uga badan kuwa kale ee la midka ah. Si kastaba ha noqotee ducadu way yar tahay, waa inaan dareemno inaan ku faraxsanahay inaan haysano, maadaama ay kaligeen abuurtay sida hoyga, in kastoo cidhiidhi tahay, haddana waxay ku tartameysaa cadaadiska dabaysha, iyo sidoo kale burburka bambooyin fiiqan.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu raaxeysto, kuwaas oo ka mid ah kuwa marinnada ah iyo waddooyinka firfircoon ayaa ah kuwa ay tahay inaan ka fikirno marka guga soo noqdo.
Wariyayaal badan oo waagaas ah ayaa qiimeeyay hoos u dhaca kujira arrimaha guga xilligaas shanta sano ee dagaalka.
Farxad, isla markiiba wuxuu saaray biilka shan-piastre - oo ahaa wakhtigaas lacag aad u tiro badan - boorsadiisii, ka dib, wuxuu si toos ah ugu orday saldhiga gawaarida ka shaqeysa si uu ugu kireeyo Delahaye isaga oo isku laalaya laab si uu magaalada ugala wareego… ku raaxeysto guga. Waa wax la yaab leh, runtii! Sanadkan, gabayadan "waalan" ayaa si lama filaan ah naftiisa u siiyay "hawo" vis-à-vis qof kasta. Hadana tani waa markii ugu horreysay noloshiisa gabayaaga Tan Da [Tản Đà] wuxuu ku fadhiyaa si dabiici ah oo hufan nooc baabuur ah “sharaf leh”, sida nin taajirsan. Gaariga Delahaye wuxuu markii hore u kaxaystay Xafiiska Boostada si uu u iibsado 3-piastre qiimihiisu yahay lacag amarro (foomka boostada) taas oo uu ugu diray saaxiibkiis dhaw Ngo Tat To [Ngô Tất Tố] gudaha Hanoi [Hà Nội] - hadiyad ahaan guga.
Waa inuu mid ka mid ah ka dhex adeegsado labada masraxa ee haray si uu ugu bixiyo kirada gaariga sidaas darteedna waxaa ku jira kiiskiisa oo keliya hal masiibo oo ugu dambeysay oo ay tahay in loo isticmaalo daboolidda kharashaadka inta lagu jiro 3 Taag [Tết] maalmood.
◊ Xigasho: DHAQANKA DHAQANKA VIETNAM Waxaa darsaday Dr. Hung Nguyen Manh [Nguyễn Mạnh Hùng].
(Booqday jeer 922, booqashooyinka 3 maanta)
Views Views: 1,951
← LIISKA DIIWAANADA DIIWAANKA A, B, C - Holylandvietnamstudies.com
LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 3 →